Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii OYSU Port Elizabeth oo maamul cusub lagu doortay
Shirkii OYSU Port Elizabeth oo maamul cusub lagu doortay
Posted by ONA Admin	/ December 27, 2011
Ururka Midowga Dhalinyarada iyo Arydayda Ogadeney ee dalka South Africa farciisa PE ayaa 26kii bishan Dec. shir hawleed isugu yimid magaalada PE xaafada Kosten xafiiska OYSU. Shirkan oo ahaa mid si fiican loo soo abaabulay ayay dad badan ka soo qaybgaleen, waxaana shir gudoon ka ahaa Halgame Cabdiraxaman Siciid.
Shirkan oo ahaa kii abid ugu waynaa ee kadhaca xaafiiska ururka dhalinyarada ee PE ayaa laga dareemayay wajiyada dadka goobta yimid qiiro halgan iyo xamaasad wadaniyadeed, iyadoo shirka ay aheed ujeedadiisu in lagu doorto xooghayen cusub.
Shirkan ayaa wuixuu furmay abaarihii 2da duhurnimo, waxaana sida ahayd dhaqanka lagu furay muxadaro diini ah oo uu soo jeediyay hogaanka dacwada ee jaaliyada S.Ogaadeeniya Halgame Sheikh Maxamed. Muxadarada Sheekha ayaa u badnayd sidii looga faa-iidaysan lahaa cimriga uu Alle ku siiyay taasoo uu sheekhu carabka ku celceliyay in wakhtigu qaali yahay loona huro wax dan aduun iyo mid aakhiro ay ku jirto.
Maxaadarada kadib waxaa shirka lagu soo dhaweeyay mudane Xuseen oo ahaa hogaankii horee dhaqaalaha faraca PE , isagoo ka warbixiyay taariikhda ururka OYSU iyo waxyaabihii uu qabtay isla markaana raaciyay waxyaabaha uu hiigsanayo iyo hawlaha muhiimka ah ee horyaala ee uu rabo in uu ku talaabsado. Khudabadan oo dheerayd ayuu mudanuhu ku sheegay in loo baahan yahay in lagu garab istaago ururka si ay ugu fududaato in uu gaadho guul.
Waxaa shirka goob joog ka ahaa gudida jaaliyada S.Ogaadeeniya oo isku dhan waxana shirka qudbad wax ku ool ah oo dhaxalgal ah kasoo jeediyay gudoomiyaha jaaliyada mudane naftiihure Casaanyo. Wuxuu gudoomiyuhu siiyay marti shariftii kasoo qaybgashay shirka warbixin waafi ah oo ku saabsanayd horusocodka halganka iyo hagardaamada wax magaradka iyo haliilka gumaysiga iyo hiilka shacabka. Wuxuu gudoomiyuhu si gooni ah daaha uga qaaday dacaayaadaha kutidhi kuteenta ah ee waxbakamajiranka ah ee ay faafinayaan dadka xumaanta iyo guuldarada jecel ee wax magaradka ah.
Waxa xusid mudan mar lawaydiiyay waxa ay itoobiya ku tilmaantay hishiis ee horay ula galeen itixaadkii daalay hadhaayawgiisii oo ay maantana sheekooyin la baal-baaliyay ay wadaan. Wuxuuna ku tilmaamay hadal murtiyeed tusale ah oo ahayd;
Waxaa la yidhi; Dameer duqoobay oo aan da’na u hadhin ayaa maalin maalmaha kamid ah xanuunsaday. Wuxuu isugu yedhay dhamaan wixi dameero aduunka joogay, wuxuu ku yidhi; waan dhimanayaa ee waan ducaynayaaye amiin dhaha. Waxayna u diyaar garoobeen inay dhagaystaan duqooda oo aamiintii dhahaan. Wuxuu ku duceeyay; allaw cirka roob danbe haka keenin, bur caws ahna hasoo bixinin. Goobtii ayay dameerihii ku kala yaceen iyagoo leh Qaaq Qaaaq. Ilaa maanta dameeruhu waxay dhahaan Qaaq Qaaq.
Nuxurka iyo odulucda tusaalaha ayaa u dhacaya nimanka quustey ee isdhiibay ee hadana leh allaw halgan danbe yaan la arkin allaw yaan la guulaysan wuxuu lamid yahay DAMEERKAAS.
Shirkan oo ahaa mid aad u heer sareeya ayaay ujeedadiisu ugu wayn ahayd in lagu dhiso maamul hogaamiya faraca OYSU ee PE iyadoo maamulkii hore uu ka dhamaaday wakhtigii loo doortay xilka.
Waxaa goobta shirka ka bilaabatay codayn lagu dooranayo xoghayaha faracaEastern Cape, waxana masraxa lasoo taagay in kabadan 6 mudane, waxaana isku fuuq fuuqsaday codkii xoghaya cusub oo helay cod aqlabiyad ah. Waxa lagu qanacsan yahay in mudane Cabdiqani oo loo doortay xoghaya gobloka EasternCapeuula iman doono hogaamin toosan oo loo aayo.
Shirka ayaan ka madhnayn suugaan iyo maansooyin iyadoo uu masraxa soo joogsaday abwaan da’yar oo Alle ku manaystay hal abuurka. Waxaa durbadiiba isbadalay dareenka dadka iyo shirkii oo isu rogay jawi cusub ood moodo in uu hada bilawday si ay dadku ugu ooman yihiin odhaahda abwaanka oo erayba erayga uu ka danbeeyo khudbadiisa uu kasii saamayn iyo qiiro badnaa.
Maansooyikii uu abawaku soo bandhigay oo gabi ahanba ahaa kuwo cusub oo maalintaa uun daaha laga qaaday ayuu wariyaha wakalada Wararka ee ONA idiin fudeediyey waxaadna ka daawataan warbaahinta goor dhow.
waxaan dhamaan salaamayaa dadka jecel gobanimada ee leh damiirka wanaagsan ee marna aan qaadanin quudhsiga iyo duliga ilaahay uma abuurin banii aadamku in ay qaataan duli iyo in layeesho sida xoolaha .in taas kadib waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dadka soomaalida ogaadeenia in ay sibuuxda fadhiga uga kacaan waayo hadii aynu 2sano kaliya sibuuxda isuracno ma usuuroobiso ethiopia in ay sii joogto ogaadeenia sidaas awgeed walaalayaal aynu sibuuxda isu garabsano halgankeena isu garab istaagno then waxaynu arki inaga oo kuguulaysanay halgankeena sidhibyar bal aynu isku dayno sidaas .dhalinyartana waxaan kulatalin lahaa in marka hore ay ogaadaan in ay yihiin lafdhabarta umadkasta sidaas awgeed waxaan idinkula taliniyaa in aad sidan si kaxoogbadan aad isu abaabushaan indinka oo ilaaliniya dhaqankeena iyo diinteena suuban labadaba iskana ilaaliya dhaqamada xunxun waayo qof ilaashan kariwaayay sharaftiisa shaqsigaah waxba umataro dadkale sidaas awgeed walaalayaal ilaaliya sharafta dhaqankeena iyo midka diinteena labadaba waad mahadsantihiin